Qaramada Midoobe oo u hiilisay Somalida Norway +Cod | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Qaramada Midoobe oo u hiilisay Somalida Norway +Cod
Hey-ada qaramada midoobey u qaabilsan qoxootiga aduunka ee UNHCR, ayaa warqad qoraal ah oo ay usoo dirtay wasiirada arimaha soo galootiga Norway, ku codsaday in qoxootiga soomaaliyeed ee Norway ku dhaqan aan lagala noqon sharciga magangalyada qoxootinimo.
UNHCR ayaa warqadeeda ku cadeysay in xaalada nabadgalyo ee magaalada Muqdisho iyo waliba guud ahaan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, aysan aheyn mid amaan ah. Isla markaana si khasab ah aan loogu celin karin dad qoxootinimo kujoogo wadamo kale. Waxeyna ka codsatay dowladaha xubnaha ka ah hey-adan, in qoxootiga soomaaliyeed ee ku dhaqan dhulalkooda aysan kala noqon magangalyada qoxootinimo.
Hey-adan qaramada u midoobey u qaabilsan ilaalinta xuquuqda qoxootiga ayaa sheegtay, in dagaalada iyo iska horimaadyada ka dhaca koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, ay wali saameyn aad u balaaran ku leeyihiin dadka shicibka ah ee kunool deegaamadaas. Sidoo kale waxey sheegtay in caruurta iyo dhalinyarada kunool deegaamadaas, lagu khasbo iney qeyb ka noqdaan iska horimaadyada gudaha ah ee sida maalinlaha ah u dhaca. Waxeyna sheegtay in awooda ilaalinta shacabka ee laga fili karo ciidanka iyo boolisku deegamadaas, ay tahay mid aad yar.